Mpitandrina vavaka lehibe tsy mampihomehy
Ny gazety Ny andro izany ny mahafinaritra ny mpitandrina izay mamaky ny telefaonina raha mbola nivavaka izy.
Andro sy ny media sosialy namelatra ny mpitandrina ny finday hilalao onja raha nitarika ny fiangonana amin'ny vavaka. Nanoratra aho na inona na inona momba izany, satria nieritreritra aho mba hamaky ny minisitra ny bönämne raha mbola nivavaka izy. Tena marina. Day manoratra ao amin'ny lahatsoratra vaovao:
- Nisy namana avy any Ohio minisitra izay manana homamiadana vadiny, hoy Perry Stone.
- I naka ny findaiko mba Messa azy.
Ary ny valin-teny rehetra ireo izay nihevitra fa ny toe-javatra mampihomehy dia hoe nisy zavatra mampihomehy mihitsy izany.
- Ianao nanao ny mahafinaritra eo amin'ny vola ho pasitera izay nanana vady voan'ny kansera.
Ny mpitandrina vaovao dia manazava ao amin'ny lahatsary YouTube.
Indraindray isika dia tokony hahita på¨varför zavatra izany, fa tsy maika hanatsoaka hevitra. Mety tsy ho araka ny toa.
Ny andro dia tokony hiala tsiny mety?
Indraindray izany dia tonga ny olona manodidina ahy no fipoahan'ny fotsiny izay efa nijanona teo amin'ny finday. Efa nitranga indroa aho fa hahazo an-fiara. Ary avy eo aho na dia tsy surfed amin'ny finday, na nijery ao anatiny. Tena ampy izay tao, ary avy eo dia nanatsoaka hevitra aho fa Surf na hijery azy.
Na inona na inona dia satria tsy fantatro, Miahiahy aho fa saro-piaro izy ireo noho ny bilaogy toerana Apg29. Ankoatra ny fitandremana mifandray amin'ny olona no mampiasa ny finday ny vaovao farany sy ny asa tao amin'ny bilaogiko toerana. Ny iray tamin'izy ireo dia nangataka fialan-tsiny, ny iray tsia.
Ary tsy tokony ho saro-piaro. Azonao atao ihany koa manomboka bilaogy ka namelatra ny be voninahitra filazantsaran 'i Jesoa Kristy!